Raysal wasaaraha Soomaaliya oo Puntland iyo Galmudug Kula Dardaarmay in ay xoojiyaan dagaalka ay kula jiraan Alshabaab – MIDNIMONEWS
Raysal wasaaraha Soomaaliya oo Puntland iyo Galmudug Kula Dardaarmay in ay xoojiyaan dagaalka ay kula jiraan Alshabaab
Axad, October, 17, 2021 (MN) – Raysal wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa maamulada Puntland iyo Galmudug ugu baaqay in ay sii xoojiyaan wada shaqaynta iyo iskaashiga ay kula dagaalamayaan Alshabaab.
Raysal wasaare ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay horumarka ka socda magaalada Gaalkacyo, isagoo sheegay in lagu gaaray sida bulshada labada maamul ay uga shaqeeyeen in nabada la xoojiyo
“Waxaan u mahad celinayaa qof kaste oo si guud iyo si gaar ah uga qeyb qaatay nabada maanta ka jirta Gaalkacyo, qaas ahaan labada guddoomiye ee Gaalkacyo, ciiddanka isku dhafka ah iyo qeybaha kala duwan ee bulshada,” ayuu yiri raysal wasaaruhu.
Bandhigga nabada Gaalkacyo, ayaa laga soo saaray war murtiyeed lagu xoojinayo nabada iyo wada shaqaynta labada maamul ee Puntland iyo Galmudug.
Waxaa bandhiggaan ka qeyb galay masuuliyiin ka kala socday labada maamul iyo dowladda federalka Soomaaliya.
Waxaa lagusoo beegay bandhiggan, iyadoo shan sano kadib ay ku beegan tahay dagaaladii Gaalkacyo ka dhacay ee sababta u noqday in bulshadu baraarugto oo dhinaca nabada loo jeesto.
Previous Maxkamada Sare Ee Puntland Ayaa Sii Daysay 14 nin oo ku eedeysanaa in ay katirsan yihiin Alshabaab
Next Masiixiyiin iyo qoysaskooda Oo Haiti Lagu qafaashay